Ywar Thagyi on Flipboard
48 Flips |2Magazines | 38 Likes | 45 Following |5Followers | @ywarthagyi | Keep up with Ywar Thagyi on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Ywar Thagyi”
Women who have more male friends have better sex than girly girls ... because their boyfriends 'are scared of the competition'<p><b>New research says girls</b> …
#SBW2014 resource partners @indeed @Infusionsoft @SocialCentiv @ZenPayroll @eventbrite @hootsuite dropping expertise. http://t.co/F3MdvFw5IT<p>Team …
တစ်ခါတုန်းက ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး ပြန်ပြောပြချင်တယ် အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ ရှပ်အကျီင်္ အဖြူရယ် ပုဆိုးရယ် ကတ္တီပါဖိနပ်ရယ်ဆိုပါတော့ ။ နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် အင်တာဗျူးတစ်ခုသွားဖို့ထင်ပါတယ် ။ လိုင်းကားတိုးစီးနေကြကောင်က အဲဒီနေ့မှ အကျီင်္အဖြူလေးကို လူတွေနဲ့တိုးရင်ပေသွားမှာစိုးလို့ တက်စီငှားစီးလာခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုံရပ်က ဆူးလေမှတ်တိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းပြီး အဲဒီအင်တာဗျူးသွားရမှာ ။ NGO အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ဖို့ထင်ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ကလောလော လောလောနဲ့မို အင်တာဗျူးချိန်ထက် တစ်နာရီလောက်စောပြီးရောက်လာတယ် ။ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းကတော့မရောက်လာသေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်လည်းတက်စီပေါ်မှာဆိုတော့ အကျီင်္သန့်သန့်လေးနဲ့ ကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့် တက်စီဘေးကနေ BM ကားတစ်စီး ဖြတ်သွားပါတယ် ။ “ မှတ်တိုင်ရောက်ပြီ မှတ်တိုင်ရောက်ပြီ ” ဆိုတဲ့စကားသံရယ် ရုတ်တရက် လက်မောင်းတစ်ခုလုံး စိုသွားတာရယ် BM ကိုရှောင်လိုက်ရလို့ ဘေးနားကို နည်းနည်းယိုင်သွားတာရယ် အဖြစ်အပျက်က သိပ်မကြာလှဘူး အလွန်ဆုံးရှိ ငါးစက္ကန့်ပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်လက်မောင်းတစ်ခုလုံး ကွမ်းတံတွေးတွေ ရွှဲစိုနေရော ။ ကားပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းပြူနေတဲ့ လူတောင်မတွေ့ရ .. ဘယ်သူထွေးသွားမှန်းလည်းမသိ စိတ်က အကျီင်္အဖြူလေးပေသွားတာရယ် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ တာရယ်ကြောင့်တုန်ယင်လို့နေတယ် ။ BM ကားဘေးနားသွားပြီး ကွမ်းတံတွေးထွေးတဲ့သူလိုက်ရှာကြည့်မိသေးတယ် အရိပ်အယောင်တောင်မတွေ့ရတော့ဘူး ။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ လိုင်းကားတွေဘေးမှာ လမ်းလျှေက်တဲ့အခါတိုင်း ရှိနေတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်သတိကြီးစွာထားပါတော့တယ် ။ အော်ပဲဆဲရမလား စည်းမရှိကမ်းမရှိ ထွေးချင်တိုင်းထွေးရမလားကွ လို့ အော်ဟစ်လိုက်ချင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ဘယ်သူ့အော်လို့အော်ရမှန်းမသိ ဘေးနားကလူတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုကွက်ကြည်ကွက်ကြည့်နဲ့ နောက်တော့မှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြန်တွေးမိတယ် ။ “ အော် .. နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံသားအယောက်တိုင်းစီရဲ့ အသိဥာဏ် ခံယူချက်နဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပေါ်မူတည်နေပါလားလို့ ” အမှန်တော့ သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေလုပ်စရာမလိုသေးပါဘူး ။ တစ်ယောက်ချင်းစီက ကွမ်းစားတတ်ရင် အိတ်ကလေးတွေဆောင်ထား လမ်းဘေးမထွေးနဲ့ ဒါလေးတစ်ချက်နဲ့တင် လမ်းတွေ အတော်သန့်သွားမလားလို့ ။ သက်တန့်ချို အေးချမ်းမွန် Credit To > သက်တန့်ချို < Thanks Re-posted By ACM 11-9-2013 https://www.facebook.com/excellencemedia
“သူများကို အသုံးမချပါနဲ့” ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ သူများကို အသုံးချတတ်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် တော်တော်ထိခိုက်တယ်။ ငါ အားငယ်တတ်တယ်။ ကြောက်တတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိစ္စတွေကို သူများလုပ်ပေးအောင် ပြောတတ်တဲ့သူဟာ အားငယ်ရတဲ့ဘဝ၊ ကြောက်ရတဲ့ဘဝကနေ တက်မလာနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဟာ ကိုယ့်တာဝန်သာ ဖြစ်တယ်။ (ဆရာတော်ဦးဇောတိက) အေးချမ်းမွန် Credit To >နှလုံးသားအာဟာရ < Thanks Re-posted By ACM 11-9-2013 https://www.facebook.com/excellencemedia